Ubhekelela ukusiza abadala KwaNyuswa | News24
Ubhekelela ukusiza abadala KwaNyuswa
Abafundi benkulisa eSibusisweni eKwaNyuswa isithombe: sithunyelwe
AKUVE kukuhle ukubona umuntu enakekela amalungu omphakathi ikakhulukazi lawo ase khulile ngokweminyaka.
Lokhu kukhonjiswe owesilisa waKwaNyuswa uMnuz Christopher Luthuli oneminyaka engama-33 ubudala ongomunye wabantu kule ndawo onakekela izaguga emphakthini aphinde enze konke okuse mandleni ekulweni nobubha.
UMnuz Luthuli uthe ukulekelela umphakathi kuyinto engaphakathi kuyena kusukela kudala.
Lo mlisa waba yilungu le nhlangano eyaziwa ngokuthi yi-eSibusisweni okuyi nkulisa nekhaya lezi ntadane ukuze ekwazi ukulekelela nabantu abahlukunyezwe isifo sesandulela ngculazi.
Uthe:“Kusukela ngisemncane ngangiwu muntu othanda ukulekelela abantu ngezindlela ezehlukile. Yingakho ngahlala phansi ngacabanga ukuthi lokhu ngizokwenza kanjan ukuze kugcwaliseleka. Ngibe yingxenye yeeSibusisweni okuyinkulisa nekhaya lezi ntandane ukuze ngikwazi ukulekela izingane nabathintekile yisifo sesandulela ngculazi,”kusho yena.
Uthe ngesikhathi eqhuba umsebenzi wakhe wokulekelela izingane wabona ukuthi baningi abantu abadala abadinga usizo emphakathini, yingakho wagqugquzeleka ukuba asungule inhlangano ezo nakekela ogogo nomkhulu kule ndawo ebizwa ngokuthi yiSizabadala Feeding.
“Esikhathini esiningi emphakathini siba nenkinga yokuthi izinhlangano eziningi zibhekelela izingane kodwa zikhohlwe wukuthi labo bantwana bahlala nogogo nomkhulu emakhaya abashiywa abazali babo. Labo gogo nomkhulu ngabe bona banakekelwa ubani? bayaludinga nabo usizo ngezindlela eziningi. Abanye uthola ukuthi abanazo izihlobo ezibasizayo nemali yempesheni ayenele ezidingweni abanazo ekhaya futhi isikhathi esiningi lokho kudala kube nendlala ekhaya. Abanye bahlukunyezwa abazukulu babo bathathe imali yempesheni bayiphuze noma bayisebenzisele ukuthenga izidakamizwa ezingekho emthethweni.
“Kuningi okwenzakalayo emakhaya lapho kuhlala khona umuntu osemdala ngoba kwesinye isikhathi uthola ukuthi lezi zingane zashiywa abazali abanye babo bayaphila kodwa bahlala kwezinye izindawo okubuhlungu ukuthi abanye bahola imali yesibonelelo sika hulumeni kodwa abayithumeli ekhaya ukuba yondle lezingane ezihlala nogogo.”
Uthe okumqoka kule nhlangano ukuthi kunakekelwe izaguga ngazozonke izindlela ngoba iningi lazo lihlushwa izifo kubalwa amathambo ushukela ne-BP okwenza kube nzima ukuthi zithole imishwanguzo ematholaphilo uma imali beyi sebenzisela ukuthenga ukudla ekhaya.
“Ngifuna konke okuhlupha izaguga kushintshe njengoba bezolekelelwa yile nhlangano. Ngifuna sibanakekele ngendlela efanele,” kusho uMnuz Lutuli.
Uqhube wathi unephupho lokuthi ashitshe impilo yale zaguga kancane kancane umuntu ngamunye.
“Lokhu ngizokwenza kancane kancane ngokwenza impilo yabo ibe lula nginikele ngokudla okunempilo ukuze bezokwazi ukuze babe ngabaqemane.
“Ngiyazi ukuthi angeke ngakwazi ukunakekela umphakathi wonke kodwa ngizoqala ngibasize ngalokhu enginakho ngigcine sengilifezile iphupho lami lokuba bonke babhekelelwe emphakathini.
UMnuz Luthuli unxuse osomabhizinisi, umphakathi nezinhlangano ezahlukahlukene ukuba zimu lekelele ekufezeni leli phupho.
“Leli phupho lizo fezeka uma ngithola uxhaso kubantu abahlukene. Nginesiqinisekiso sokuthi uma singasebenzisana kulokhu, kuningi okuhle esizokuvuza. Le nhlangano yamukela noma ngabe yiluphi uhlobo loxhaso.
“Ngithanda ukugqugquzela amabantu abangathanda ukuba ama volontiya ukuba bexhumane nami ukuze sibambisane ekulweni nobubha.”
Uma uthanda ukulekelela iSizabadala ungaxhumana noMnuz Christopher Luthuli enombolweni ethi: 076 202 2963.